100% ugu horreeyay ee diyaaradaha dagaalka ee Afrikaanka ah - Afrikhepri Fondation
Lisagu waa kii ugu horreeyay oo si buuxda diyaaradda Afrika ay 13-kii Agoosto uga duusho Koonfur Afrika. Qalabka nuuca militariga ah waxaa loo adeegsan doonaa ilaalo xagga cirka ah waxaana la filayaa inay ku iibiso illaa 10 milyan oo doolar. Bishii Agoosto 13, 2014 saacaddu markay ahayd 7 a.m., ayaa diyaaraddii ugu horreysay ee 100% Afrikaan ah waxay ka degtey gegida diyaaradaha ee Pretoria Wonderboom Airport. Diyaaradda yar, ee loo yaqaan AHRLAC (dayuuradaha iftiinka sare ee iftiinka maskaxda) waxay leedahay naqshad xoog badan oo u eg cayayaan weyn waxayna qaadi kartaa duuliye iyo sidoo kale rakaab. Diyaaradaha nuuca milatariga ah waxaa heegan u ah ilaalin xagga cirka ah.
Waxay awood u yeelan doontaa inay fuliso hawlgallada ka hortagga iyo maaraynta dabiiciga, musiibooyinka deegaanka, xakameynta xuduudaha, amniga gudaha, badda, sirdoonka. Nooca ugu horeeya waxaa marka hore lagu tijaabin doonaa waxqabadka duullimaadka, ka hor inta aan lagu qalabeysan nidaamyo hubaysan oo markaa qiimeyn lagu sameyn doono.
Ma jirto wax ka yar injineerada African 60 ayaa ka shaqeynayay naqshadeynta iyo wax soo saarka tan iyo 2011.
Mashruuca 100 ee Koonfur Afrika
Diyaaradda ayaa gebi ahaanba loo qaabeeyey, la soo saaray oo la isku habeeyey Koonfur Afrika, midhihii iskaashiga ka dhexeeyey Paramount, kooxdii ugu horraysay ee difaaca qaanso-roobaadka, iyo Aerosud, oo ah shirkad hoosaadka hawada sare ee maxalliga ah. Inkayar 60 Injineer Afrikaan ah ayaa ka shaqeeyay nashqadeynta iyo wax soo saarkooda ilaa iyo sanadkii 2011, taariikhda la bilaabay mashruuca, iyadoo celcelis ahaan da'da kooxda mashruuca ay jiraan 32 sano oo keliya.
Naqshadeynta qaybaha ayaa gabi ahaanba ahayd mid dijital ah, iyada oo lama huraan u ah in la isu keeno iyada oo aan alxamdu jirin, sida ciyaar fudud oo makaanik ah, saacado kooban gudahood. Wasakhda iyo warshadaha ayaa sidoo kale loogu talagalay oo ay soo saartey shirkadda Paramount ee Koonfur Afrika si ay awood ugu yeeshaan inay soo saaraan birta iyo qaybo ka mid ah diyaaradda sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah.
Qiimaha qeybta oo ah 10 milyan oo Yuuro
Horumarinta AHRLAC waa inay ku kacdaa ku dhawaad ​​200 milyan oo doolar shirkadaha South Africa, iyadoo lagu dhawaaqay iibinta qiimahoodu qiyaastii 10 milyan oo doolar midkiiba. Diyaaradani waxay daneyneysaa dhowr wadan oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO iyo wadamada soo koraya, sababa la xiriira qiima jaban marka loo eego dhulalka ilaalada hawada ee hada jira. ma u malaynaysaa? " furay = ”90 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Soo-saareyaasha madow iyo saynisyahannada: Daabacaadda saddexaad
1 cusub oo ka yimid € 23,99
Iibso 23,99 €
laga bilaabo Sebtember 22, 2020 5:42
Taariikhda lagu sii daynayo 2018-10-09T00:00:00.000Z
Edition Casharkii 3aad
Publication Taariikhda 2018-10-05T00:00:00.000Z
format Eind Kindle Ebook
Awoodda isku Kalsoonida - Brian Tracy (Audio)
Adduun Ma Jiro Kansar La'aanta, Taariikhda Vitamin B17 (PDF)
Awooda Mawduucaaga - Yuusuf Murphy (Audio)